မသင်္ကာစရာလေးတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » မသင်္ကာစရာလေးတွေ
Posted by စဆရ ကြီး on Nov 6, 2012 in Letter to The Editor | 37 comments
ဒီတစ်ပါတ်၊ နှစ်ပါတ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာလေးတွေ ပြန်ဖွင့်ကြည့်မိလိုက်တာ ၀င်မန့်ထားတဲ့ ကွန်မန့်မှန်သမျှကို ရဲဗလောင်းခတ်နေအောင် လိုက်နီထားတာ မြင်မိတော့ စိတ်ထဲမှာ သံသယ၀င်မိသား.. ဒီဆိုက်က ဥပဒေအရဆိုရင် ကွန်မန့်တစ်ခုက အစိန်း 3+ ဖြစ်နေရင် အနီအဖြစ်ပြန်ပြောင်းစေလိုလျင် အနီ -3 ခါလောက်ပေးမှ ရတယ်ပေါ့နော်… ခုတွေ့မိတာ ကျွန်တော့် Post ထဲမှာ အစိမ်းတွေအများကြီးအပေးခံထားရတဲ့၊ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘယ်သူ့မှ ထိခိုက်စော်ကားတာမပါတဲ့ မန့်ထားတဲ့သူတွေရောပါ အနီတွေ ရဲဗလောင်းခတ်နေအောင် ပေးခံထားရတာမြင်တော့၊ ဒါကပို့စ် တစ်ခုထဲမှာ မဟုတ်ပဲ ပို့စ်တိုင်းကို ဒီရက်ပိုင်းမှာမှ နောက်ပြန်လှည့်ပြီး တစ်မင်သက်သက် စောက်မြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ အုပ်စုလိုက်ဝိုင်းပြီး ယုတ်မာတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်နေတာမြင်မိတယ်..
ဆိုတော့ကာ… အုပ်ချုပ်သူတွေများလာတယ်လို့လဲ သတင်းကြားတာတစ်ကြောင်း၊ Personally လိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြင်တာကတစ်ကြောင်း၊ ရွာထဲအုပ်စုဖွဲ့သောင်းကျန်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ သံသယရှိတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် အတော်လေးကြာအောင် ရွာနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေပါမည်ဆိုတဲ့အကြောင်း။
အဲ့အနီတွေ အစိမ်းတွေ ဂရုစိုက်မနေနဲ့ဗျို့။ နီနီ စိမ်းစိမ်း ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာသာဆက်လုပ် …
ကျနော် က အစက ကိုယ်ဘာမှားပြောမိပါလိမ့်လို့ အတော်စဉ်းစားနေတာ။
ခုတော့လည်း နီနီ၊ စိမ်းစိမ်း ဆိုပြီး ထားလိုက်ရတာပဲ။..
‘ မြင်ပါများတော့ ကလိ၊ ကလိပါများတော့ သိလာ၊ အကြည့်ရဲ့နောက်မှာ ငြိတွယ်
ပါလာတဲ့ အနီလေးတွေကြောင့်သာ၊ဖွင့်မပြောလည်းဘဲ ရှင်ရယ်..ဖွင့်မပြောလည်းဘဲ
စိတ်ထဲ ထားမနေပါနဲ့ရှင်…၀ါးစားလို့ရလည်း ကောင်းသား… :harr:
ဥပစ်ခါ (ကိုယ်ရေးတတ်သလို) ပြုထားလိုက်ပါကွယ်…..
စိတ်ဒုက္ခရှာလို့အေရယ်… ညီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် အဲလောက်အားလား စဉ်းစားကြည့်…
အဲလောက်အချိန်ပေးပြီး ကိုယ့်ကိုအားပေးထားတာ ကိုယ့်ပိတ်သတ်ပေါ့…
ကျုပ်လဲ သဂျီးဆီကနေ ပွိုင့် ချူသွားပါကြောင်း
ချူဖို့ဘဲ သိဒယ် …
ကျမရှိစု မဲ့စု ပိုစ့်ဟောင်းတွေ အားလုံးလဲ ရဲရဲတောက်နေတာပါပဲ ။ တခါတလေဆို အများကြီးနီနေတာ အားရပါးရ။ စိတ်ထဲ ထားမနေပါနဲ့ ။ နီချင်နီ စိမ်းချင်စိမ်း ။
ကြာကြာမှ တခါရေးတာကို ဘယ့်နှယ့်ကင်းကင်းနေအုန်းမှာလဲ ။ ရေးပါရှင်။
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို သိပ်ဂရုမစိုက်ပါနဲ့ ။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဂီတပညာရှင်ကြီး ဗီသိုဗင် က ကမ္ဘာကျော်တဲ့ တီးလုံးတွေကို ဈာန်ဝင်စားပြီး တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာ သူက နားမကြားတဲ့သူတယောက်မို့တဲ့လေ။
ကဲ မကြားရလေ ပိုအောင်မြင်လေပဲ ။ ဆိုတော့
မကြားချင် မမြင်ချင် မသိချင်ယောင်သာဆောင်လိုက် ။ အမှိုက်တွေ စိတ်ထဲ အ၀င်မခံနဲ့ ။
ကိုယ်တိုင်ကတော့ အမှိုက်လို့ ထင်လာရင် စိတ်ထဲ ကရော ဘ၀ထဲကရော ရှင်းထုတ်လိုက်တာပဲ ။ ဘယ်တော့မှ စိတ်ရှုပ်မခံဘူး။ ဥပေက္ခာပြုလိုက်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ခီညာ.. ပီကာဆိုဟာလည်း မျက်မမြင် တယောက်ဖြစ်ပြီး
၀ှစ်တနီဟူစတန်ဟာလည်း စကားမပြောတတ်ရှာပါဘူး …
မနောက်ပါနဲ့ ကိုရဲဝင်း သူများတကာကို ရှာကြံအားပေးနေတာကို လာပြီး ဖျက်လို ဖျက်ဆီးနဲ့
အနီပေးလို့ ရွာနဲ့ ဝေးအောင်နေမယ်ရင်…
ကိုယ့်စိတ်ကို သူတပါးစိတ်တိုင်းကျ ချယ်လှယ်ခံသလို ဖြစ်နေမယ်။
မှန်ရာကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြိုးစားရပ်တည်စေချင်တယ်။
ကိုယ့် ပိုစ့် အဟောင်းတွေ ကို ကိုယ်တောင် တစ်လ နေ လို့ တစ်ခါ ပြန် မလှန်ကြည့် မိဘူး။ သူတို့က အချိန်ပေး နိုင်လို့ အနီတွေ လိုက် ပေး နိုင် တာ ၊ ကိုယ့် ပိုစ့် တွေ ကို ပြန် ကြည့် ဖေါ် ရတယ်လို့ ကြံဖန် ဂုဏ်ယူ လိုက် ပါ။ ဒီလောက် စာရေးကောင်းတဲ့ သူက ဘယ်နှယ်ကြောင့် နား ရ မှာတုန်း ။ ဆက်သာရေး ပါ ၊ အမြဲ အားပေးနေပါ တယ်။
မောင်ရှုံးကို ပထမဆုံးပို့စ်ကထဲက သတိထားမိပါတယ်။ ပို့စ်တင်ပြီး ကွန်မန့်မရလို့ဆိုပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ အကုန်ပြန်ဖျက်ထားတယ်။ အဲဒီလို လုပ်နေလို့ အဲဒီနံမည်ဖြစ်နေတာလို့တောင် ကွန်မန့်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ် ရန်ကုန်မှာ တွေ့မယ်လို့ပြောထားပြီးမှ ပြန်လှည့်သွားသေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ … ဒီလိုရွာလေးဆိုတာက လွတ်လပ်ပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာတောင် ခံစားချက်ကို အဲဒီလောက် ဦးစားပေးနေရင် တခြားနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ..
အဲဒီလောက်အထိ မခံစားပါနဲ့လို့ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ် …
ဆြာရှုံးရေ…။ နောက်ဆုံး စုံစမ်းသိရှိထားသမျှကတော့ ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာ မိုးပြာဂိုဏ်းကို အားကျပြီး မိုးနီဂိုဏ်း ဆိုပြီး ဖွဲ့ထားတယ်လို့ သတင်းရရှိထားပါတယ်။ ခုဆိုတော်တော် အင်းအားတောင့်နေပြီး သူ့တို့၇ဲ့ ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်မှုကလဲ တော်တော် ကျယ်ပြန့်သလို အူးခိုင် ဆိုသူ ဘော့စိ တစ်ယောက်ကလဲ နောက်ကနေ အထောက်အပံ့ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(ဘာမှ စိတ်ထဲထားမနေပါနဲ့ ဆြာရေ..။ ကောင်းတဲ့ဖက်ကကြည့်ရင် ကိုယ့်မှာ အစိမ်း ပိတ်သတ်ရော အနီ ပိတ်သတ်ပါရှိတာ ၀မ်းသာစရာ)
ကဲ..မိုးနီ ဂိုဏ်းဆြာတို့ ကျုပ်ကို ပေးကြစမ်းပါဂျာ အနီတွေ။ အနီ ခယေဇိ ဆိုတော့ ရဲရဲတောက်လေ ကြိုက်လေပါပဲ…ပြော်ထှာ။ ….
သူတို့ က အမှန်တကယ် အားပေးကြသူတွေပဲ။ ဒါပေတိ သူတို့ က အပေါင်း နှင့်အနှုတ် လက္ခဏာကို
အမှတ်မှား နားမလည်ကြလို့ ပါ။
သူကြီး အနေနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာကို အနီ သတ်မှတ်ပြီး အနှုတ်လက္ခဏာကို အစိမ်းလို့ ပြန်သတ်မှတ်လိုက်ရင် ဒီပြဿနာပြေလည်သွားပါလိမ့် မယ်။
ဒီ ကျနော့်ကွန်မန့် လေးကို သဘောကျကြလို့အားပါးတရ နီပေးလိုက်ကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်
တောတွင်းပျော်အနေနဲ့အမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင်မှာဖြစ်ကြောင်း
လုံမအထင်ပေါ့နော်…ရွာထဲက ရွာသူရွာသားအချင်းချင်းက စိမ်းလေ့ နီလေ့ မရှိကြဘူးထင်ပါတယ်… ကွန်မန့်တစ်ခုနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကို အဲ့ဒီကွန်မန့်အောက်မှာပဲ ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်…
ဆိုတော့…အဲ့ဒီလိုလိုက်နီလိုက်စိမ်းတယ်ဆိုတာ ရွာသူားမဟုတ်တဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်… သူတို့ရဲ့အမြင်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့မဖော်ပြဘဲနဲ့ တစ်ခုတည်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးကို အသုံးချနေတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်…
ဒါကြောင့် အစိမ်းအနီဆိုတာတွေကိုလည်း ဂရုမစိုက်ဘဲ ဥပေက္ခာပြုထားပါတယ်…
ဒီလိုပြောတာဟာ ရွာပြင်ပက စာဖတ်သူအားလုံးကို ရည်ညွှန်းပြီး စော်ကားချင်တဲ့စိတ်မဟုတ်ပါဘူး… ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လိုက်နီလိုက်စိမ်းနေမယ့်အစား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထွက်ပြောစေချင်ပါတယ်…
ဒါမှမဟုတ် ညစ်ချင်တဲ့စိတ်သက်သက်နဲ့ တမင်တကာ လိုက်နီနေတဲ့သူတွေကိုလည်း ဥပေက္ခာပြုထားပါတယ်လို့…
ဒါကြောင့် ကိုရင်ရှုံးအနေနဲ့ ဒီအပေါ်မှာ ဘာသဘောမှမထားဘဲနဲ့ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ့်စာတွေကို ရွာထဲမှာ ဆက်ပြီးမျှဝေပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်..
ငါ့အကို ရေ..ရွာထဲမှာ စာရေးတာ.လမ်းဘေး ရေချမ်းစင်တည်တာပေါ့ဗျာ..ဘယ်သူခပ်သောက်သောက် မသောက်ပဲနေနေ..အများသူငှါသောက်ဖို့ အတွက် သောက်ရေအိုးလေးထဲမှာ ရေဖြည့်ပေးချင်တာက ငါ့အကို ဆန္ဒမဟုတ်လား..ဒီသဘောပေါ့ဗျာ ခု့ငါ့အကိုရဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ပြောချင်တာတွေ သိ့စေ့ချင်တာတွေ ဗဟုစသု့တတွေ အမြင်လေးတွေ ရေအိုးလေးထဲ ထည့်နေတာပဲလေ သောက်သောက်မသောက်သောက် ဖတ်ဖတ်မဖတ်ဖတ်ပေါ့ဗျာ ခွက်ခိုးတဲ့သူလည်း ရှိ့မှာပဲ နောက်ဆုံး ငါ့အကိုရဲံ့စေတနာ တန်ဖိုးနားမလည်ပဲ ရေအိုးရိုက်ခွဲသွားတဲ့ သူလည်းရှိ့မှာပဲ ဒီလိုလုပ်ပေါ့ဗျာ (နောက်တစ်ခါ ပို့စ်တစ်ခု့တင်ပြီးတိုင်း ကွန့်မန့်လေးတွေ ဖတ်ချင်တယ်ဆို မဖတ်ခင်ငါ့အကိုရဲ့ ကွန်ပြူတာ မျက်နှာပြင်ဘယ်ဘက်ချမ်း ၁ လက္မလောက် ဒေါင်လိုက် အထက်အောက်ပေါ့ဗျာ တိတ်အစိမ်းရောင်လေး ကပ်ပြီးမှ့ ဖွင့်ဖတ်ပေါ့ဗျာ..ဟော..ကွန့်မန်းအားလုံး စိမ်းဗျာ..).နီတာတွေ စိမ်းတာတွေ ကသူတို့အလုပ် စာရေးချင်တာက ငါ့အကို့အလုပ် ဒါပဲပေါ့ဗျာ
လူ့ ပြည် လူ့ ရွာဆိုတာ ဒီလိုဘဲလေ..
တိုက်ပွဲနဲ့ ပြောရင် ရှုံးချင်ရှုံးမယ် နိုင်ချင်နိုင်မယ်..တိုက်ဖို့ က အဓိက….
ဒီရွာမှာဆိုလည်း နီချင်နီမယ် စိမ်းချင်စိမ်းမယ် ရေးဖို့ က အဓိက….
အထက်ကပြောသလိုဘဲ ရေအိုး အခွဲခံရတယ်ဆိုလည်း နောက်အသစ်တစ်လုံးပေါ့….
အနီတွေ အစိမ်းတွေက အဓိကမဟုတ်ဘူး ရေးနေရင် အဆင်ပြေပြီ
သူတို့မှာ အားအားယားယားနီနေတော့ ကိုယ့်ဘာဖြစ်တာလိုက်လို့ နော့
ကျွန်မ ပိုစ့်လေးတွေလည်း ရဲရဲတောက်နေတာပါပဲ……..ကိုရှုံးရေ။ ကျွန်မကတော့ ဂရုကိုမစိုက်တာ
နီးချင်နီ၊ စိမ်းချင်စိမ်း……. ခုတောင် ကိုရှုံးပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးမှ ကိုယ့်ပိုစ့်လေးတွေ ပြန်ကြည့်မိတာပါ။
ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့ နီတာ ၊ စိမ်းတာက အဓိကမကျပါဘူး လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။
ကို ရှုံး လူ ရယ် ။
အဘ Comment ပေးခဲသူပါ ၊ ခင်လို့ပြောတာမှတ်ပါနော် ။
ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ပျော့ရတာလည်းကွယ် ။
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာကို ရဲရဲလုပ်စမ်းပါ ။
ဘေးလူ ပြောစကားတွေကို သိပ် ဂရုစိုက်မနေစမ်းပါနှင့် ။
နို့မို့ရင် ၊ ကိုရင့်ဘဝက သူများပါးစပ်ဖျားမှာတင် လမ်းဆုံးသွားလိမ့်မယ် ။
ခင်ဗျားဒို့ဂလည်း သဂျီးမင်းအာဘော်ဂျီး နှမြောစရာ
ဒီလူတွေတွက် သဂျီးမင်းဂို ကျုပ်ဂဘဲတောင်းဘန်ဘာဒယ်
စေ့စေ့တွေးကြည့်ရင် ကိုယ်ရေးထားတာ ဖတ်သွားပြီး
ပြောခြင်တာပြောသွားမယ် ကတစ်မျိုး ( ကိုယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာကသပ်သပ်ပေါ့ )
ကိုယ့်ဂို ဂရုစိုက်လို့ ဒီလိုလုပ်သွားဒဲ့လူဒေဂို ကြေးဇူးတင်ဂျဇမ်းဘာ
မဟုတ်လို့ကတော့ ကိုယ့်ဂိုဘာမှမလုပ်သွားဒေါ့ ဟာတာတာဂျီး
ကိုယ့်ကို တစ်ခုခုလုပ်သွားဒေါ့ နေသာထိုင်သာရှိဒါဘော့ ဟုတ်ဘူးလား
ကိုရင်ရှုံးရေ…..ခင်ဗျားဘာမှ အနီတွေ အစိမ်းတွေ ဂရုစိုက်မနေစမ်းပါနဲ့ဗျ။ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာကိုရေး၊ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောစမ်းပါဗျာ။အရင်တုန်းက နီနေရင် စိမ်းအောင်လိုက်လုပ်ပေးသေးတယ်။အခုတော့ ကျုပ်တစ်ယောက်တည်းမနိုင်တော့မယ့် အတူတူ အနီရော၊အစိမ်းရော သောက်ဂရုကိုမစိုက်တော့ဘူး။ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ အနီ၊အစိမ်းသောက်လုပ်ရှုပ်ခံပြီးမလုပ်တော့ဘူး။မကြိုက်ရင်ကော်မန့်ရေးမယ်၊ကြိုက်ရင်လဲ ကော်မန့်ရေးမယ်။ကိုယ့်ထင်မြင်ယူဆချက်၊ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ကိုယ့်ကို မစော်ကားသရွှေ့ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲစော်ကားနေတာမှမဟုတ်တာပဲဗျ။ကိုရင့်စာတွေကိုစောင့်ဖတ်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို အနီ၊အစိမ်းတွေကြောင့် လမ်းခွဲမသွားစမ်းပါနဲ့။ကဲ အနီပေးချင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ကျုပ်ကွန်မန့်ကို သောက်လုပ်ရှုပ်ခံပြီးပေးကြစမ်းပါ။နီနေရင် တရုတ်တွေ အယူအဆအရ မင်္ဂလာပေါ့ဗျာ။မင်္ဂလာဆောင်ရင်တောင် ဖိတ်စာအနီ၊ဝတ်စုံအနီဆိုတော့ ကျုပ်ကို အနီပေးလေ မင်္ဂလာလို့သတ်မှတ်လေပဲ။အဲကျုပ်ကတော့ ဗမာစစ်စစ်ကြီးပါ။မင်္ဂလာရှိသော အနီရောင်များကိုမြင်ချင်လို့ ဝိုင်းဝန်းပြီး အားတိုင်း၊ယားတိုင်း အနီပေးကြစေကုန်သတည်းးးးးးးးးး
ပုဆိုးခြုံထဲကနေ လက်သီးထိုးနေတဲ့သူတွေ မေးချင်ပါ၏။ ကိုယ်ပိုင်ပုံတင်ပြီး စာတစ်ပုဒ်ရေးကြစမ်းပါလို့..
အထက်က ၀င်ရောက်၊ ထောက်ပြ၊ ပြောဆို၊ အားပေးကြသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ အမြင်ကပ်လို့ကို မနားတမ်းစာတွေရေးချင်ရာ ရေးပြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း..
ဘုဂိုမှ ဂရုမစိုက်နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာ ကိုယ်လုပ်
နောက်ဆို.. ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးအမြင်ကပ်အောင် .. မလုပ်ကြနဲ့နော..
မင်းရဲ့ နာမည်က ရှုံးပါနေတော့ သူရို့ ခမျာ မင်းကို ချစ်လွန်းလို့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် နီပေးရတာနေမှာပါ။
တကယ်တော့ နီ/စိမ်း နှိပ်ဖို့ က ချက်ချင်း ဖျတ်ကနဲ တောင် မရဘူး။
ဒါကို အချိန်ကုန်ခံ၊ လက်ညောင်းခံပြီး လုပ်နေတာကိုတော့ အံ့ဩလို့ မဆုံး။
သူများ အနီပေးလို့ တော့ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့။
မင်းကို အားပေးသူတွေ အပြည့်။
အနီေ၇ာင်က ရဲရင့်ပြတ်သားခြင်းတွေးပေါ့…ဒါဆို အားပေးတဲ့ ဘက်ဖြစ်ကြောင်းတွေးပေါ့ကွာ..
ရင်ထဲ မထားပါနဲ့ ……
အနီ၊ အစိမ်းဆိုတာ ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး၊
ကိုယ်ပြောတာနဲ့ သူနားလည်တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ရင်အနီဖြစ်မှာပဲ
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်ခြင်း၊ အမြင်ခြင်းမတူပါဘူး၊
အတိုက်အခံရှိမှာ အောင်မြင်တာ၊ ပိုပြီးပွဲစည်တာ။
ဟုတ်တယ်ဗျ တစ်ခါတစ်လေ ကွန်မန့်ကောင်းလေးတွေကို အနီပေးထားတာ..
ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့လဲတော့မသိပေမယ့် .. မနေနိုင်လို့ ပြန်စိမ်းပေးလိုက်တာပါ ပဲ..
ဒါပေမယ့် .. ပိုစ်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ အဲလို အနီ တွေအပေါ်မှာ တလွဲစိတ်မ၀င်သင့်ပါဘူးဗျ ..
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပိုစ်ကို နီတာမဟုတ်ပဲ ကွန်မန့် ကို နီတာလေဗျာ .. ဟုတ်ဘူးလား :harr:
သူများရေးတာတွေပဲလိုက်ဖတ်နေရတာ မရေးတော့ဘူးဆိုတော့ ဖတ်ကမဲ့ လူတစ်ယောက်လျော့
အော် ကိုရှံးရယ် ကျွန်တော် ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင် အဝါလေးပါထည့်လိုက်ချင်တယ် ဒါမှ ပိုစ့်တစ်ခုလုံးက စိမ်းဝါနီ နိုင်ငံတော်အလံလေးဖြစ်နေမှာ။ အလကားစ တာ ခွေးဟောင်တိုင်းထကြည့်နေရင် အိပ်ရေးပျက်တာပဲအဖတ်တင်မယ်။ ကွန်နက်ရှင်က မကောင်းရတဲ့အထဲ အနီကို ဂရုမစိုက်နိုင်ပေါင်ဗျာ ။
အနီကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ဓါက်ပျော့ညံ့မှုတခု လို့ပဲထင်ပါတယ်။
အနီရောကို ကြိုက်လို့ …
အခုအနေအထားမှာ အနီအစိမ်း ဖန်ရှင်က အသုံးကျတော့ခြင်းမကျတော့ခြင်းက တပိုင်းလို့ ထင်ပါတယ်။
တတိယတပိုင်းကတော့ အနီအစိမ်းဖန်ရှင်ကြောင့် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကို လဲ ချင့်ချိန်သင့်ပါတယ်။
စတုတ္ထတပိုင်းကတော့ ဗိုက်ကလေးကိုမေး …။ သူနောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တာ….
We should interpret red asamean of telling that the post writer is courageous enough to spell out his ideas even there might be some contentious issues on it.Inaway, it isakind of compliment. The comment maker find it interesting to mark red on the post.
နီနီစိမ်းစိမ်းပါရှင်။ ကိုယ်တွေ လိပ်ပြာသန့်ရင်အေးဆေးပါ။ စိတ်ထဲမထားပါနဲ့ ကိုရှုံးရယ်။